AUMBI: Barnaamij furan oo furan si loo abuuro USB la kaydin karo Windows | Laga soo bilaabo Linux
Kuweena inaga ah saynisyahanada kumbuyuutarka ama aan jecel nahay sayniska kombiyuutarka oo leh xamaasad badan, sifiican ayaan u naqaanaa, waa maxay a USB la qaadi karo, ama lagu dhajin karo ama lagu bilaabi karo, Isbaanish. Si kastaba ha noqotee, kuwa aqoonta u leh arrinta, tani maahan wax fudud oo fudud Qalabka keydinta USB gudaheeda lagu qaado, mid ama ka badan Nidaamyada hawlgalka, ku habboon inuu ordo, labadaba adiga rakibaadda sida aad Isticmaal.
In la abuuro aaladda noocan ah, midkastoo ay tahay Nidaamka hawlgalka, kuwa badan baa jira Barnaamijyo (Codsiyo) ayaa la heli karaa, laakiin kiiskan, daabicitaankan ayaa si toos ah diirada loogu saaray AUMBI, taas oo ah a app il furan oo cusub, loo abuuray ujeedkan, on Windows.
Si kastaba ha noqotee, waxaa habboon in la xusuusto barnaamijyada noocan ah, taas oo ah, codsiyada noo oggolaanaya inaan qaadno mid ama ka badan, Nidaamka Howlgalka ama aaladaha la kici karo, a wadida usb in loo isticmaalo kombiyuutar kasta, way badan yihiin.
Si aad u ogaatid iyaga, waxaad ka heli kartaa daabicitaankeenii hore ee loo yaqaan "Maareeyayaasha duubista sawirada sawirada qalabka USB", halkaasoo lagu xusay Noocyada ugu faa iidada badan uguna caansan ee noocan ah, labadaba waa isku dhufasho badan, iyo kaliya loogu talagalay GNU / Linux, Windows iyo MacOS.
1 AUMBI: Absolute USB MultiBoot Rakibaye
1.1 Waa maxay AUMBI?
1.2 Tilmaamo ama faa'iidooyin xusid mudan
AUMBI: Absolute USB MultiBoot Rakibaye
Waa maxay AUMBI?
AUMBI macneheedu waa "Qalabaynta USB MultiBoot Absolute" Ingiriisiga, ama "Absolute Multiboot USB Installer" oo Isbaanish ah. Waana, aalad agab softiweer ah oo loo adeegsado nuqul ka mid ah Nidaamka hawlgalka laga bilaabo a Faylka ISO ilaa a wadida usb kaydinta.
In hab in rakibidda ama tijaabinta mid ama ka badan Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, Windows, iyo qaar ka mid ah aaladaha kale ee la bilaabi karo ama yutiilitida. Iyo kiiska Nidaamyada hawlgalka isku dhafan, waxay u oggolaaneysaa iyaga inay la yimaadaan qaab hantida adkeysiga, taasi waa ilaali faylasha gundhigga ah ama isbeddelada la sameeyay iyaga ku saabsan.
Abuurayaasheeda waxay ku sifeeyaan sida soo socota, ayaga degel rasmi ah:
"AUMBI waa il furan oo noo oggolaanaya in aan abuurno USB-badan oo boot leh nidaamyo kala duwan oo lagu shaqeynayo; Iyada oo ku saleysan YUMI, AUMBI waxay ujeedadeedu tahay inay ka faa'iideysato koodhka oo ay si joogto ah u horumariso, isbeddelka ugu horreeya ee kan ka horreeyay waa awoodda luuqadaha badan ee saaxiradda iyo kabaha bootka. Waxyar oo kabadan 1MB, AUMBI waa adeeg aad ufiican oo si fudud loogu qaado".
Tilmaamo ama faa'iidooyin xusid mudan
Maaddaama ay tahay a fargeeto furan 'YUMI« waxay u taagan tahay, iyo waxyaabo kale, waayo:
Is-beddelka degdegga ah iyo kan ugu habboon ee koodh isha.
Taageerada luqado badan Ahaanshaha luqadda Isbaanishka, oo si buuxda loo taageeray.
Aad u fiican dukumeentiyo ku qoran Isbaanish iyo Ingiriisi, labadaba qaab HTML iyo PDF ah.
Taageero dheeraad ah GNU / Linux Qaybinta iyo Qalabka Kabaha casri ah.
Soo koobid, AUMBI waa heer sare Furan barnaamijka furan si aad uga sameysato USB bootable ah Windows-ka, Tan iyo markii si buuxda loo furo waxay u oggolaaneysaa in lagu cusbooneysiiyo ixtiraamka YUMI, oo loo adeegsado kalsooni iyo nabadgelyo badan. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay taageero dheeri ah oo loogu talagalay luuqada Isbaanishka iyo Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan casri ah.
Shakhsiyan, dhowrka jeer ee aan isticmaalo Windows waa in la isticmaalo YUMI, laakiin hadda waxaan ku dari doonaa AUMBI liistadayda Barnaamijka Bilaashka ah iyo Codsiyada Ilaha Furan ee Windows.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «AUMBI (Absolute USB MultiBoot Installer)» taas oo ah codsi cusub oo ah «Código Abierto» la heli karo si loogu abuuro USB-ga la kici karo ee Windows-ka, waa daneyn iyo faa'iido weyn, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » AUMBI: Abka barnaamijka furan si aad ugu sameysato USB-ga lagu kaydin karo Windows-ka
Waad salaaman tihiin. Markii aan bilaabayo barnaamij software ah waxaan helayaa shaashad qalad ah oo ii sheegaysa in qaarkood ay dhaceenkhaladaadka dllmaxaa yeelay diiwaanada ayaa maqan. Waxaan arkaa in websaydhkaagu uu aad u dhammaystiran yahay casharro laakiin ma aanan helin wax la xidhiidha mowduucan. Ma i caawin kartaa?
Ku soo jawaab Hernán
Salaan Hernan! Kani waa GNU / Linux, Software bilaash ah iyo Open Source Blog. Oo waxaan u maleynayaa inay su’aashaadu ku saabsan tahay Windows. Si kastaba ha noqotee, waa inaad raadsataa magaca maktabadaha (DLL) ee lagu xusay shaashadda qaladkaaga oo aad isku daydo inaad hesho xirmo ama balastar ay ku jiraan si aad ugu dhex gasho Nidaamkaaga Howlgalka.
Odoo: Suugaanta Codsiga Websaydh ee 'Open Source Enterprise'
Linspire 8.7 wuxuu ballan qaadayaa waxqabad weyn oo ku saabsan gaabis Windows 10 kombiyuutarada ah